जान्नुहोस, केहो डिहाइड्रेसन? - Everest Dainik - News from Nepal
जान्नुहोस, केहो डिहाइड्रेसन?
काठमाडौं, चैत १३ । नियमित पिएको पानीले थुप्रै रोगबाट बचाउँछ । त्यसैले हाम्रो शरीरका लागि पानी अत्यावश्यक छ । शरीरमा पानी बढी वा कमी हुन सक्छ । यी दुबै अबस्था स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ठीक होइन । यद्यपी, शरीरमा पानीको कमी भएमा अझ धेरै समस्या निम्तिन्छ । जसलाई चिकित्सकीय भाषामा डिहाइड्रेसन भएको भनिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस धेरै बच्चा जन्माए मुटुरोगको बढी खतरा
दिनभर टाउको दुख्नुका साथै टाउको भारी हुने समस्या भएमा त्यो पानी अभावको संकेत हुन सक्छ । शरीरमा पानीको कमी भएमा मस्तिष्कलाई पर्याप्त मात्रामा उर्जा मिल्दैन । यस्तो अबस्थामा काम गर्दा मस्तिष्कलाई वढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जसले अत्यधिक थकान महसुस गराउँछ । आँखामा सुख्खापन आउने समस्या भएमा यो पनि पानी अभावको कारणले हुनसक्छ ।
याे पनि पढ्नुस स्वाइन फ्लुको संक्रमणबाट ४ महिनामा १८ को मृत्यु
पानी अभावकै कारण आँखा सुन्निने, जलन हुनेलगायत समस्या देखापर्छ । शरीरमा पर्याप्त पानी नभएमा खाना राम्रोसँग नपच्ने समस्या हुन्छ । जसका कारण कब्जियत र एसिडिटीको समस्या निम्तिन्छ । पानीको अभावले शरीरको छाला फुश्रो हुने समस्या हुन्छ । यदि पिसाबको रङ पहेँलो, गाडा पहेँलो वा फिका भएमा पनि शरीरलाई पानी नपुगेको बुझ्नुपर्छ । यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस निद्रासम्बन्धी १० भ्रम जसलाई हामीले आजैबाट त्याग्नुपर्ने
ट्याग्स: health education